E-Journal: Comment on "The man who wanna talk HRD!"
Comment on "The man who wanna talk HRD!"
မှတ်ချက်အတွက်မှတ်ချက်၊..........။ ဆရာသုရဲ့ပို့စ်ကို ဖတ်ပြီး ရေးတဲ့ မှတ်ချက်ပါ။ ဟဲ ဟဲ နည်းနည်းရှည်သွားလို့ဖြစ်မည် ..မိတ်ဆွေက ပို့စ်အဖြစ်တင်ဖို့ တိုက်တွန်းတာကြောင့် အကောင်အထည်ဖော်လိုက်တာပါ။ ပို့စ်အဖြစ်ရည်ရွယ်ပြီးရေးခြင်းမဟုတ်ဘဲ အလွတ်သဘော မှတ်ချက်အဖြစ် လက်တန်းရေးထားခြင်းမျှသာဖြစ်ကြောင်း ထပ်လောင်းပြောကြားပါရစေ။
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက Anonymous at 8:25 PM
စာဖတ်တတ်လာအောင် စည်းရုံးသွေးဆောင်ကြရအောင်။ သူတစ်ပါးကို စည်းရုံးသွေးဆောင် ပြုစုပြိုးထောင်တယ်ဆိုတာ သွယ်ဝိုက်ခေါင်းဆောင်မှုက ပိုမိုထိရောက်တာ။
ကျွန်တော်ပြောချင်နေတာကို ပြောပေးသွားတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်သလို၊ အတွေးလေးတွေ တူနေသလိုခံစားရလို့ ဝမ်းမြောက်မိပါကြောင်း။
Comment on "What Is Love???" - နှလုံးလှဖို့ အလှဆုံ...
လမ်း (သို့) ချိန်းစာ
The man who wanna talk HRD!
"Reason for Nothings"
Lost in Summer!